အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်သွားတဲ့ လူကာကူရဲ့ ဇာတ်လမ်း ၊ ဘယ်သူမှ မလိုချင်တဲ့ အန်တိုနီ ၊ ခပ်သွက်သွက် ခပ်များများတွေ့လာရတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်သွားတဲ့ လူကာကူရဲ့ ဇာတ်လမ်း ၊ ဘယ်သူမှ မလိုချင်တဲ့ အန်တိုနီ ၊ ခပ်သွက်သွက် ခပ်များများတွေ့လာရတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ချဲလ်ဆီး နဲ့ အင်တာမီလန် တို့ အကြားက လူကာကူ အတွက် ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ ပါပြီ ။
စီးရီးအေ ကလပ် ဟာ လူကာကူ ကို ယူရို ၈ သန်း နဲ့ အငှား ခေါ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ပွဲကစားမှုအပေါ် မူတည်ပြီး နောက်ထပ် ယူရို ၄ သန်း ထပ်မံ ပေးချေရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လူကာကူ ချဲလ်ဆီးမှာ ရရှိနေတဲ့ လုပ်ခ လစာ ကိုတော့ အင်တာက ပေးချေမှာ မဟုတ်ဘဲ တနှစ် လုပ်ခ ယူရို ၈ သန်း ပေးချေ သွားမယ်လို့ သိရပြီး အပြီးသတ် ဝယ်ယူခွင့် မပါရှိပါဘူး ။
လာမယ့် အပတ်ထဲမှာ ဆေးစစ်မှုပြုလုပ် သွားမယ်လို့ ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနို က ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဖေဘီယံ ဗီယာရာ ကို ပေါ်တို ကနေ ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်မှာတော့ အာဆင်နယ် ဟာ မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး ဂါဘရီရယ် ဂျေဆု ဘက်ကို အပြည့်အ၀ အာရုံ စူးစိုက် တော့မယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဒါရိုက်တာ အီဒူး ရဲ့ သားဖြစ်သူ လွီဂီ ဂပ်စပါ ဟာ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရရှိဖို့ အတွက် အာဆင်နယ် အကယ်ဒမီ ကနေ ဝက်ဖိုဒ့် အသင်းဆီကို အလွတ် နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ သွားတော့မယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဝက်ဖိုဒ့် ဟာ အမေရိက ကလပ် ကိုလံဘတ်စ် ခရူး ရဲ့ ကစားသမား ကူချို ဟာနန်ဒက်စ် ကိုလည်း ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း နဲ့ ခေါ်ယူကာ ၂၀၂၅ အထိ စာချုပ် ချုပ်ဆို လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တာဝန်ရှိသူတွေ ကတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံ နေကြပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် နယ်သာလန်သား အတွက် သဘောတူညီမှု မရရှိ ကြသေးပါဘူး ။ ဒီယွန် ကို ရောင်းချပြီးမှ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗား ကို ခေါ်ယူ နိုင်မယ့် ဘာစီလိုနာ ကလည်း သတ်မှတ် ထားတဲ့ ကြေးကို လျော့ချပေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိ ဖြစ်နေပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် တောင်ပံ ကစားသမား အန်တိုနီ ယူနိုက်တက် ကို ရောက်လာဖို့ အလားအလာ များနေချိန်မှာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူး အန်တိုနီ မာစီရယ် ကတော့ ခေါ်ယူမယ့် အသင်း မရှိတာကြောင့် လာမယ့် ရာသီကို ယူနိုက်တက် နဲ့ ပြန်လည် ဖြတ်သန်း ရဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
PSG အကြီးအကဲ အယ်ခီလိုင်ဖီ က ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ သူတို့ ပေးတဲ့ ပမာဏ ထက် ပိုပြီး ဘာပေ ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘာပေ ကိုယ်တိုင်က ပြင်သစ် မှာ ဆက်နေဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး အသင်းကို ဘယ်သူတွေ ရောက်လာဖို့ ရှိတယ် ၊ ဘယ်သူတွေ ထွက်သွားဖို့ ရှိနေတယ် ဆိုတာတွေကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြောမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခီလိုင်ဖီ က ပြောဆိုခဲ့သလို လာလီဂါ ဥက္ကဌ အနေနဲ့လည်း သူတို့ PSG ထက် သူ့ရဲ့ လိဂ် ( လာလီဂါ ) အတွက်သာ ပိုစိတ်ပူသင့်ကြောင်း ၊ လာလီဂါ ဟာ အကျဘက်ကို ဦးတည်နေတဲ့ လိဂ် ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG နဲ့ နိုက်စ် အသင်းတို့ အကြားမှာ နည်းပြ ခရစ္စတိုဖီ ဂယ်လ်တီယာ အတွက် ဆွေးနွေးမှု ဟာ အချက် အလက် အချို့ ကျန်ရစ် နေသေးတာကြောင့် ရက်အနည်းငယ် စောင့်ရဖို့ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ရဲ့ ဂျပန် တိုက်စစ်မှူးလေး မီနာမီနို ကို မိုနာကို အသင်းက ၅ နှစ် သက်တမ်း စာချုပ် နဲ့ ချုပ်ဆို နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး အဖြစ် ယူရို ၁၅ သန်း + အပိုဆုကြေးတွေ ပေးချေ ရမယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
PSV ရဲ့ ဂျာမန် ကွင်းလယ်လူ မာရီယို ဂေါ့ဇီ ဟာ ဂျာမန် ကလပ် ဖရန့်ဖွတ် ကို ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ပြီး ၂၀၂၅ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ် ။ ဖရန့်ဖွတ် ဟာ ဂေါ့ဇီ အတွက် PSV ကို စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ယူရို ၄ သန်း ပေးချေ ခဲ့ရပါတယ် ။
PSV ကတော့ ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူး လုခ် ဒီယွန် ကို ခေါ်ယူ နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ကွင်းလယ်လူ အဲလစ်ဝှစ်ဆယ် ဟာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကို ၁ နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ စာချုပ်နဲ့ လာရောက် ကစားဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ဆောက်သမ်တန် အသင်းကတော့ ဘိုချန် အသင်း ကစားသမား အာမဲ ဘယ်လာကော့ချပ် ကို ၄ နှစ် စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် နဲ့ ဘန်လေ တို့ဟာလည်း ဂိုးသမား နစ်ပုစ် ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အတွက် နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူညီမှု ရရှိ ထားခဲ့ကြပြီလို့ သိရပါတယ် ။
ဘရာဇီး ကလပ် အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး ကို ဇန်နဝါရီ တုန်းက ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့တဲ့ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ခံစစ်မှူးဟောင်းကြီး ဒီယေဂို ဂိုဒင် ဟာ ဘရာဇီး မှာ အဆင်မပြေ ခဲ့တာကြောင့် ထွက်ခွာပြီး အာဂျင်တီးနား ကလပ် ဗဲလက်စ် ဆားစ်ဖိးလ် အသင်း ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့တယ်လို့ မာကာ သတင်းစာက ဖော်ပြသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် ဟာ မီလန် စကရီနီယာ ကို နွေရာသီမှာ လက်လွှတ်ရဖို့ ရှိနေတဲ့ အတွက် ပြန်လည် အစားထိုး နိုင်ဖို့ တိုရီနို နောက်ခံလူ ဂလီဆင် ဘရီမာ နဲ့ ဖီအိုရင်တီးနား ရဲ့ နီကိုလာ မီလန်ကိုဗစ် တို့ကို စောင့်ကြည့် ပြင်ဆင် နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရပါတယ် ။
အေစီမီလန် ကတော့ ရီနာတို ဆန်းချက် ကို PSG ထက် ပိုပြီး မကမ်းလှမ်း နိုင်တာကြောင့် ဆာဆူအိုလို ကွင်းလယ်လူ ဟာမက် ဂျူနီယာ ထရာအိုရေး ကို ပြောင်းလဲ ချဉ်းကပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ကလပ် မာဆေး ကတော့ အတ္တလန်တာ ရဲ့ ကိုလံဘီယာ တိုက်စစ်မှူး လူးဝစ် မူရီရယ် ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဗလင်စီယာ တောင်ပံ ကစားသမား ဂွန်ကာလို ဂွီဒက်စ် ဟာ တနိုင်ငံတည်းသာ နည်းပြ မော်ရင်ဟို ကိုင်တွယ် နေတဲ့ ရိုးမား အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ လိုပေမယ့် ကလပ် ၂ သင်း အကြားမှာ ယူရို သန်း ၄၀ ဆိုတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးက အခက်အခဲ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
နောက်ခံလူ အများအပြားကို ဆုံးရှုံးနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ဟာ ပြင်သစ် ကလပ် လန်းစ် အသင်းရဲ့ နောက်ခံ အစွန်လူ ဂျိုနသန် ကလော့စ် ကို စောင့်ကြည့် နေပြီး ကင်းထောက်တွေ စေလွှတ် ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရိုင်ယန်ဂစ် တရားဝင် နှုတ်ထွက်သွား အပြီးမှာတော့ ဝေးလ် လက်ရွေးစင် အသင်းဟာ ယာယီ နည်းပြ ရော့ဘ် ပေ့ဂျ် ကို အမြဲတမ်း နည်းပြ အဖြစ် စာချုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။ ပေ့ဂျ် ဟာ ဝေးလ် အသင်းကို ကမ္ဘာ့ဖလား ဝင်ခွင့် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
လိဒ်ယူနိုက်တက် ဟာ တောင်ပံ ကစားသမား ရာဖင်ညာ အတွက် ပေါင် သန်း ၆၀ ဈေး သတ်မှတ် ထားပြီး အဆိုပါ ပမာဏ အောက် ကမ်းလှမ်းလာမှုတွေ ကို ပယ်ချ သွားမယ်လို့ သိရပါတယ် ခင်ဗျာ . . . . . ။
Previous Article အဲရစ်ဆင်ကိုသာ ခေါ်ယူလိ်ုက်မယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက် ပိုဆိုးသွားမယ်လို့ မန်ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးလိုက်တဲ့ မာဖီ
Next Article ရာဖင်ဟာ အတွက် တရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှု ပထမဆုံး အကြိမ် ပေးပို့လိုက်တဲ့ အာဆင်နယ်